Ukuphupha ngoMgqibelo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Phupha ngoMgqibelo. Ukwazi intsingiselo yamaphupha kunzima, eli nqaku lichaza indlela yokutolika amaphupha.
NgoMgqibelo ngumhla wesithandathu weveki kwaye kwiinkcubeko ezininzi kubhengeza impelaveki. Abantu abaninzi banemigqibelo ngeMigqibelo. Ungalusebenzisa olu suku lweveki ukwenza umsebenzi wasekhaya, ukuthenga izinto, ukucoca, okanye ukwenza igadi. Abanye bakhetha ukuchitha uMgqibelo kuphela kwimisebenzi yosapho, ukuya kukhenketho, ukuya ezivenkileni, ukudibana nabahlobo okanye ukuphuma ebusuku.
Ewe kunjalo, baninzi abantu abaqhelekanga ukuba neMigqibelo bangabikho. Umzekelo, nabani na osebenza kwintengiso, ukutya, ukuthuthwa koluntu, okanye ubuntatheli kuya kufuneka asebenze nangeMigqibelo ngokunjalo.
Njengophawu lwamaphupha, uMgqibelo usenokubonakala emaphupheni omntu wonke, nokuba kwenziwa ntoni na kule veki. Iyintoni intsingiselo yomfanekiso wephupha "ngoMgqibelo"?
1 Uphawu lwephupha «ngoMgqibelo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ngoMgqibelo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha "ngoMgqibelo" - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ngoMgqibelo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, uMgqibelo uthathwa njengophawu lwe isiqabu. Imisebenzi kunye nemithwalo iyanyamalala kuloo mntu kuthethwa ngaye. Kwindawo yobungcali, ngoku kukho isigaba esizolileyo kwaye ekugqibeleni unexesha lokujonga kwakhona kwaye ukhathalele ubomi bakho babucala. Ubudlelwane boluntu bunokuba buye babandezeleka kutshanje ngenxa yomsebenzi wakho onzima onxulumene nomsebenzi.
Ngoku kubalulekile ukubonisa abahlobo bakho kunye nosapho ukuba basadlala indima ekhethekileyo nebalulekileyo ebomini bakho. Kusenokuba kufanelekile ukubonisa umbulelo ngokuqonda osele ukubonakalisile kwimeko yoxinzelelo.
Ezinye iintsingiselo zesimboli yephupha "ngoMgqibelo" zivela kwiimeko zephupha. Ukuba usebenze kwimeko ngoMgqibelo, unokuziva ukonganyelwa kokubini ekhaya nakwindawo yobungcali. Ufuna ukwazi ukuthumela imisebenzi kunye noxanduva lokufumana uxolo.
Ukuba uyokuthenga, oku kungazisa ukuphucula kwi imeko yemali. Umsebenzi wasekhaya, kwelinye icala, uphawula ukukhathalela Ukuhlalisana kosapho, kunye neehambo ophupha ukuzenza nosapho ngoMgqibelo.
Wonke umntu otyelele iklabhu okanye ibha ngoMgqibelo ephupheni ulangazelela unxibelelwano olungaphezulu koluntu kunye ukubandakanywa kwiqela.
Uphawu lwephupha «ngoMgqibelo» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokusebenza kwengqondo, iphupha ngoMgqibelo libonisa isidingo senkqubo yakho ubomi bakho. Umntu ochaphazelekayo kufuneka athathe ixesha lokumamela, afumanise ukuba yintoni emhluphayo ngalo mzuzu kwaye kubalulekile kuye kwixesha elide. Kuzo zombini iimeko, unokuzibandakanya ekuthatheni ikhefu kubomi bemihla ngemihla.
Ukuba uphupha ngoMgqibelo, oku kufanele kukukhuthaze ukuba uphinde ufumane uxolo lwangaphakathi kwimeko-bume yokuzola kunye nomgama.
Umqondiso wephupha "ngoMgqibelo" - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, uMgqibelo umele ixesha isikhuselo kwiimbopheleleko. Ngenxa yoko, abo babandakanyekayo banokuzithemba ukukhula ngokomoya gxila kwaye uchaze iinjongo zexesha elizayo.